नाक, कान, घाँटीको क्यान्सर के कारणले हुन्छ?र यसका बच्ने उपायहरु । - VOICE OF NEPAL
३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १५:४२ 352 ??? ???????
क्यान्सरमा अनियन्त्रित कोशिकाको वृद्धि हुन्छ । त्यो फ्याक्टरलाई चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन ।शरीरको अन्य क्यान्सरजस्तै हो, यो क्यान्सर पनि । यसमा एउटा मात्र कारण होइन विभिन्न कारण समावेश हुन्छन् ।
क्यान्सर हुने कारण
चुरोट, तमाखु, बिडी, गुट्खा, पान पराग, रक्सी सेवन आदिका कारणले क्यान्सर हुन्छ । अर्को कारण जिन पनि हो । त्यसैगरी खानेकुराबाट पनि क्यान्सर हुन्छ । कार्सिनोजेनिक खाना
(क्यान्सर गराउने खाद्य तत्व) ले गर्दा पनि क्यान्सर हुनसक्छ । धेरै पिरो तथा पोलेका खानेकुराबाट क्यान्सर लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ मुखको घाउ लामो समयसम्म निको नभए उक्त घाउ क्यान्सरमा परिणत हुनसक्छ । मुखमा घाउ हुँदा र बांगिएको दाँतले त्यो घाउमा छुँदा लामो समयसम्म मुखको घाउ निको हुँदैन । मुखभित्र सेतो दाग–धब्बा आए त्यो पनि क्यान्सरमा परिणत हुनसक्छ ।
काठको काम गर्ने मानिसलाई काठको धूलोले नाकको क्यान्सर हुनसक्छ ।
पहिलो चरण : यो चरणमा क्यान्सर सीमित भागमा मात्र हुन्छ । यसमा कुनै पनि अंग खेर जाँदैन । सुरुको अवस्थामा क्यान्सर सीमित भागमा मात्र भएकाले सर्जरी तथा रेडियोथेरापीबाट उपचार गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो चरण : यो चरणमा क्यान्सर नजिकैको भागमा फिजिएको हुन्छ । यसलाई सर्जरी गरेर ठीक गर्न सकिन्छ । कुनै–कुनैमा सर्जरी तथा रेडियोथेरापी गराउनुपर्ने हुन्छ । यो चरणमा पनि क्यान्सरको उपचार सम्भव हुन्छ ।
तेस्रो चरण : यो चरणमा पुगेको क्यान्सर धेरै फैलिसकेको हुन्छ । यसमा एउटा मात्र उपचार नभई विभिन्न उपचारको आवश्यकता पर्छ । यसमा सर्जरी तथा रेडियोथेरापी, सर्जरी तथा किमोथेरापी तथा रेडियोकिमोथेरापी तथाा रेडियोकिमोथेरापीे आवश्यक पर्न सक्छ ।
चौथो चरण : यो चरणमा क्यान्सर धेरै फैलिसकेको हुन्छ । एउटामा मात्र नभएर अन्य अंगमा पनि क्यान्सर फैलिसकेको हुन्छ । रोगीको बाँच्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । उपचारपछि पनि पूर्णरूपमा रोग निको हुने सम्भावना कम हुन्छ । यस्ता बिरामीलाई सहज होस् भनेर सास फेर्न सजिलोका लागि ट्युबको प्रयोग तथा खाना खान सजिलोका लागि नली राखिदिएर, पीडा कम गर्न औषधि तथा रेडियोथेरापीको प्रयोग गरिन्छ । यसैगरी रगत बगेको छ भने रगतका नसाहरू (जुन क्यान्सरको कारणले बनेका हुन्छन्) सुकाउन रेडियोथेरापी दिइन्छ ।
सामान्यतया ३० देखि ५० वर्षका मानिसमा नाक, कान, घाँटीको क्यान्सर देखापर्ने डा. दिभा बताउँछिन् । विश्वमा महिलाको तुलनामा पुरुषमा यस्तो क्यान्सर बढी पाइएको छ । पुरुषले बढी धूम्रपान तथा मद्यपान गर्ने भएकाले यस्तो भएको हो ।
मुखको क्यान्सर : मुखमा आएको घाउ लामो समयसम्म निको नहुनु, मुखमा अल्सर आउनु, मुख वा जिब्रोमा मासु पलाउनु, दाग–धब्बा आउनु ।
घाँटीको क्यान्सर : आवाज धोद्रो हुनु । सास फेर्न गाह्रो हुनु, खाना निल्न गाह्रो हुनु, घाँटी सुन्निनु वा डल्लो ग्लान्ड आउनु ।
कानको क्यान्सर : कान डम्म हुनु, कानबाट रगत आउनु, कान नसुन्नु ।
रोग लाग्न नदिन
सर्जरी तथा रेडियोथेरापीबाट यसको उपचार गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा केमोथोरापीको पनि आवश्यकता पर्छ । समयमै अर्थात् सुरुवातको अवस्थामा थाहा पाए क्यान्सर रोगको उपचार सर्जरीबाट सम्भव हुन्छ तसर्थ रोग लागे तुरुन्त सम्बन्धित चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । उपचारपछि पनि नियमित चेकअप गराउनुपर्छ । यसको उपचार टिमवर्कमा गर्नुपर्छ । क्यान्सर जति खतरनाक भए पनि समयमै पत्ता लगाएर उचित उपचार भएको खण्डमा यसलाई निको पार्न सकिन्छ ।